DHAQDHAQAAQA XAYAWAANKA EE EEYAHA: WAXA LA SAMAYNAYO, BUUFINADA WANAAGSAN, SILSILADAHA IYO SHAAMBADA - GURI, GURI
Milkiilayaasha eeyda ayaa badanaa la yaabay, iyagoo fiirinaya amarka xayawaankooda joogtada ah. Dhanka kale, wax walbana waa la sharaxay.
Si loo fahmo sababta keenta dabeecadda aan la fahmin eey, waa ku filan in la eego jaakadeeda ujeeda boodada iyo shilinta. Kuwani waa dulinka ugu caansan jidhka xoolaha.
Haddii inta lagu jiro kormeerka waxba laga helin waxay ka fiicnaan doontaa in laga hortago cudurka.
Dib u eegista habka ugu fiican
Hadda iibka ayaa soo bandhigaya doorasho weyn oo ah daroogo si looga hortago boodada iyo shilinta. Milkiilaha eyga oo aan taqasus lahayn sida xulashada hodanka ah ayaa si weyn u wareeri kara.
Guddi: Sida caadiga ah, ha qaadin wax talaabo ah oo la xariira xayawaankaaga iyada oo aan talo ka helin dhakhtar xoolaad.
Marka aad dooranayso daroogada ku habboon khabiirka takhasuska xayawaankaaga ayaa tixgelin doona dhammaan xuduudaha. Ka dib oo dhan, qalab ah oo ku habboon naaso yar yar ma noqon karaan kuwo ku haboon eyga wayn oo dhan. Iyo xitaa haddii ay ku haboon tahay, marka la eego xajmiga xayawaanka, khabiirka takhasuska ah ayaa si deg deg ah u feejignaan doona, iyo sidoo kale qaddarka lagama maarmaanka u ah isticmaalka ladagaalanka dulinka. Dhammaan macnaheeda iyo daroogooyinka ayaa si sax ah loo sheegi karaa mid ka mid ah kooxaha soo socda:
xidhxidhkaloo isticmaalo si looga hortago caabuq;
dhibcood, habka ugu caamsan ee wax looga qabto boodada;
buufinta, halka ixtiraamka xaddiga codsiyada ay aad u waxtar badan yihiin;
shaambo noolaha. Bixi talaabada ugu haboon ee aan laheyn dhibaatooyinka iyo saameynta daawada. Talada dhakhtarka xoolaha, waxaad ka qaadan kartaa qalab xitaa dhalashada.
Maskaxda ku hay in boodada ay noqon karaan sidayaal ugxan ah oo qadhaadh ah. Sidaa daraadeed, ka dib burburinta dulinka jirka ee xayawaankaaga xayawaankaaga, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin si loo nadiifiyo jirka eeyga ka soo goos goos ah.
Waa ikhtiyaar wanaagsan ee looga hortago in boodada laga qaado infekshanka xayawaankaaga.
Waxaa soo saaray soo saarayaasha gudaha iyo kuwa ajnabiga ah, oo u qaybsan diyaarinta loo isticmaalo ilaalinta, iyo sidoo kale dhererka xargaha, iyadoo ku xiran hadba eeyga.
Shirkadda Holland "Beafar"Waxaa jira fursado badan oo suugaan ah oo la heli karo.
35 cm dheer, loogu talagalayWixii dhadhan iyo eeyaha ilamaha yaryar. Walxaha shaqadu waa tetrochlorinphos. Codsiga waxaa loo oggol yahay in uu gaaro da'da 2 bilood.
65 iyo 85 sentimitir dheer. Wixii eyda ee cabbirka caadiga ah iyo eeyaha waaweyn ee eeyaha. Walxaha shaqada - dimpilat. Wixii xoolaha da'doodu tahay 6 bilood.
Qiimaha qiimaha laga bilaabo 230 illaa 850 roon, waxay ku xiran tahay dhererka iyo gobolka iibinta qoorta. Ka hor intaan la isticmaalin, qaado qoryaha dariiqyada, kadibna jiid si aad u dhaqaajiso walxaha shaqada. Ma aha inay ka cabsadaan inay qoyaan, laakiin marka la qubaysto walxaha shaqaynaya ee sunta ahi waa sunta kalluunka. Ka ilaali xayawaanka 4 bilood jirka. Ha u isticmaalin daawooyinka kale marka aad xiran tahay midab adigu.
Waxaa laga heli karaa saddex nooc oo ah dhir kala duwan oo dhererkoodu kala duwan yahay (38, 53 iyo 70 cm), oo loo qorsheeyay siday u kala horreeyaan loogu talagalay curiyeyaasha yaryar, dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn. Daawooyinka firfircoon - boogaha iyo flumetrin. Wuxuu siiyaa ilaalinta xayawaanka muddo 6 bilood ah. Kabaha si buuxda ayay u badbaado eeyaha nooc kasta oo jinsi ah. Qiimaha qiimaha ee 700-1000 rubles. Waxaa soo saaray Bayer. Germany
Ka hor intaadan maydhin, waxaa lagula talinayaa inaad ka saarto qoryaha, maadaama ay lumiso hantideeda markii la sii daayo biyaha, dib u soo kabashada ka dib qalajinta. Marka ugu horeysa ee la dabaqo, waxaa suurtagal ah in lagu xanaaqo maqaarka xayawaanka hoostiisa hoostiisa, kaas oo waxay qaadataa 2-3 maalmood isaga qudhiisa.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan kiltiks collars in maqaal.
Horumarka shirkadda Ruushka Astropharm BlochNet ayaa ku dhacda. Afar nooc oo dhibco boodh ah ayaa la heli karaa, iyadoo ku xiran miisaanka xayawaankaaga. Lagu qoynayo qoorta iyo dhabarka eeyga.. Waxyaabaha firfircoon - fipronil. Codsiggu wuxuu ilaaliyaa xoolaha muddo laba bilood ah.
Ma jiraan wax saameyn ah oo liddi ku ah. Ka reeban waa dulqaad shakhsiyadeed oo ka kooban qaybaha ka kooban dhibcaha. Qiimaha qiimaha ee Ruushka 80-190 rug.
Daawadan waxaa loogu talagalay in lagu dilo jirka eyga. boodada, injirta, shilinta, nadiifinta. Walxaha shaqada - fipronil. Waxaa soo saaray Merial, Faransiis. Foomka la sii daayo - Polietilen 100 iyo weel 250 ml ahoo leh qalab lagu buufiyo.
Marka la samaynayo xayawaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo miisaankiisa si loo xisaabiyo heerka caadiga ah ee loo isticmaalo. Laga soo bilaabo dhalo leh mugga 100 ml, oo leh saxafi kaliya, 0.5 ml oo ah wakiilka ayaa laga saaray, 250 ml - 1.5 ml. Qiyaasta codsiga waa 3-6 ml halkii kiilo ee miisaanka xayawaankaaga. Kiimikada laguma talinayo in la isticmaalo daawooyinka kale. Contraindications iyo saameynaha ayaa la ogaaday. Daaweynta ka dib, looma oggola inay xayawaanka ku xoojiso 24 saacadood oo u ogolaato xiriirka carruurta.
Caawin! Qiimaha hal buufin ee buufinta Frontline waa qiyaastii 1000 rukhsiis halkii 100 dhalo, 1700 rubuc - 250 ml.
Habka macquulka ah ee ay soo saareen waxaa soo saaray khabiiro khibrad lehApi - san"magaalada Moscow, burburinta boodada maqaarka eygaaga ah Walxaha shaqada - permethrin. Dhamaan dulinyada oo dhan eeyga oo leh hal isticmaal. Shamboo waxay ka hortageysaa dharka qubeyska illaa da'da 3 bilood, haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, iyo sidoo kale xayawaanka soo kabashada.
Cuntada waxaa lagu daboolayaa dhogorta qoyan oo biyo ah qiyaasta 1.0 ml halkii kiilo oo culus. Shampoo si tartiib ah ayaa loo xaaqay xumbo, kadibna raaci biyo diirran. Waxaa lagu talinayaa in la beddelo qashin si looga hortago dib-u-qaadidda by dulin. Dukaanka Qiimaha xirmooyinka 150 ml 110-140 rubuc.
Ilaalinta eeyga oo ka yimaada Gooryaanka
Daroogada waxaa soo saaray ururka Ruushka. Celandine. Magaca Caalamiga ah "Pyrantel"Maaddooyinka shaqeeya - Pamfal pyrantel iyo Praziquantel. Waxaa lagu heli karaa baako ama caag bacaha leh mugga 2 illaa 20 ml. Inta lagu jiro kaydinta, dhufashada jajabyada waa la ogol yahay. Ka hor intaadan isticmaalin, isku rux kiis ballaaran oo iftiin leh - midab jaalle ah. Ku dar daroogada iibka sirinjeerka iibinta.
Isticmaalka daroogadu waxay keenaysaa in carqaladeeyo dhaqdhaqaaqa muruqyada ee dulin, naafonimadooda, oo ay ku xigto dhimasho. Duufaan dhiman ayaa laga saarayaa jirka eeyga leh saxarada. Qiyaasta waxaa loo xisaabiyaa si gooni gooni ah xayawaan kasta oo ah heerka 1 ml ee daroogada halkii 10 kg oo miisaanka jirka ah. Waxaa laga yaabaa in la gashado afka eyga ama isku qasan cuntada.
Wax saameyn ah lama helin. xitaa qiyaasta xad-dhaaf ah ee sedex geesoodka ah. Xitaa khudbadaha loo isticmaalo isticmaalka daroogada shakhsi ahaaneed ee daroogada.
Daawooyinka saxda ah ee saxda ah ee la soo xushay ayaa xayiraya xayawaankaaga qoryaha iyo tuubada. Daboolka ayaa gacan ka geysanaya ilaalinta muddada dheer ee caabuqyada soo noqnoqda, iyo shaamboo kaliya maaha inuu ka caawiyo baaskiilka, laakiin sidoo kale sameynta nadiifka iyo dhalaalka.